Qawween ilmi Oromoo baatu qabsoo Oromoo utubuu qaba – Ayyaantuu
HomeAmharicQawween ilmi Oromoo baatu qabsoo Oromoo utubuu qaba
Qawween ilmi Oromoo baatu qabsoo Oromoo utubuu qaba
Ajaja Olaanaa ABO/WBO
Ji’oota darbeen keessa irra deeddebidhaan yeroo lamaa oliif Ajaja Olaanaan ABO/WBO ilmaan oromoo waraana weerartuu PP keessa jiraniif waamicha Oromummaa dhiyeessaa turuun isaa ni yaadatamaa. haaluma kanaan ilmaan Oromoo danuun waraana mootummaa kanaa keessaayyuu humna addaa jedhamuu keessa jiraan iddoo garaagaraatti waamicha kanaaf owwaatuun gootummaa isaanii muldhisanii jiruu. kanumaan wal qabatee godiinoota Oromiyaa bakka garaagaraatti RIB ergama badii Oromummaa baatuu waliin wal dura dhaabbannaa irraa hanga qawwee isaanii waliin mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti of gabasuutti eejjannoo isaanii mul’iisaa jiru. ilmaan Oromoo kallattii kamiiniyyuu qabsoo kanaatti hiriiraniif ammaas galaanni bilisummaa jennaa.
Ammas yaaddoo yeroo akka Oromootti qabnu irraa kaanee, ilmaan Oromoo qawwee alagaa baatanii jiraan yeroo Oromoon dhumaa jiruu kanaatti Oromootti afaan qawwee deebisuu irra garboomfataatti naanneessuun adaaba itti kennuun dirqama Oromummaa isaanii bahuu qabu. yeroo maatiin qabsa’ootaa kophaatti filamanii sababa ilmoo isaaniif ajjeefamaa jiraan kanaatti, yeroo Oromummaa qofaaf Oromoo maqaan gurracha’ee ajjeefamaa jiruutti, yeroo itti Oromoon salphifamaa jiruu kanaattis ilmi Oromoo waloof owwaachuun yeroo rakkoo kanatti tumsa Oromummaa waliif godhuun dirqaama Oromummaati. kanaaf mootummaa PP kan ilmaan jala deemtuu imaammata miniliik gad dhaabuuf deemtu kanaaf beekanis ta’ee osoo hin beekin waardiyyaa tahuun kiyyoo garbummaa jala Oromoo tursiisuu waan taheef, Qaamni Oromoo waraana jara kanaa keesda jiruu kamiyyuu yeroon itti gootummaan saba isaaf dhaabbatuu amma tahuu hubaachiisna.
Ilmaan Oromoo sababa jirenyaaf Poolisii Oromiyaa, Hunma addaa Oromiyaa, hokkoora bittimsa oromiyaa, Rayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi milishaa naannoo tahuun qawwee hidhaattanii jirtan hundiyyuu saba irraa dhalaattan waliin hiree tokkoo waan qabnuuf yeroon itti Oromoo utubuun rakkoo kana keessaa baaftan ammaadha. Qaamni dhiiga ilmaan Oromoon aangootti olbahee minilikummaa nurratti faarsaa jiruu kun humnoota asiin oliitti kaafne keessa nafxanyoota jibbaa Oromummaa qabaan kan bakka hundatti Oromoo ajjeesaa, salphisaa, gidirsaa fi itti roorrisaa jiraan ilmaan amaaraa akka seensisee jiruus beekamaadha. kuni immoo ijoollee Oromoo waraana kana keessa jiraan irratti xaxaa shiraa dalagamaa jiruudha. rakkoo kana hundafiyyuu furmaanni tokkichi jiruu ilmaan Oromoo qawwee irbuu seenanii hidhataniin uummata isaanii bifa seerawaa taheef ogummaan isaanii ajajuun uummata waliin dhaabbachuu tahuu ammaas irra deebinee hubachiisna.
walumaa galaatti ilmaan Oromoo yeroon yeroo oromoo waliin dhaabbataniidha!, yeroo oromoo irraa diina qoluun salphina itti uffisuu qabdaniidha!, yeroo itti qawwee sirni nafxanyaa siniitti hidhee waliin moora QBOtti seentan!, akkasumaas yeroo itti WBO waliin dhaabbachuun sirna cunqursaa fi hiraarsaa mootummaan nafxanyaa impaayeera itoophiyaa Oromoo irratti labse kana ofirraa qolaannuudha. kanaafiyyuu ijoolleen Oromoo ammaas irra deebiin akka mooraa QBOtti dabalamuun hojii gootummaa hojjattaan Ajaja olaanaan ABO/WBO waamicha isaa irra deebiin siniif dhiyeessa.
Bifuuma walfakkaatuun waamicha fincilaa warraaqsa galaana uummataa Qeerroon Bilisummaa Oromoo waamen wal qabatee mootummaan kun ammumaan ajaja faallaa ogummaa keessanii dabarsaa waan jirtuuf ilmaan Oromoo humna waraana diina keessa jirtaan, waamicha kana irraa qooda fudhachuun seenaa dalaguu qabdu. kanaan faalla saba Oromoo irratti dhukaasuun yakka mootummaan kun dalagee akka qooddattaniif shira xaxaa jiru kana irratti dammaquu qabdu. ammaas ajajni olaanaa ABO/WBO Oomoo irratti dhukaasuu irraa akka of dhaabdan waamicha diniif dhiyeessa.
walumaa galaatti ilmi Oromoo tokko mootummaa saba isaa ajjeesuuf yeroon itti waardiyyaa dhaabbatee teessoo weeraartuu tiksuu gahuu qaba. durii kaasee Oromoon humna waraanaa qofaaf dhimma itti bahaa turaan kunis saba Oromoo xiqqeessuuf kan dhimma itti bahaa turaniidha, amma booda garuu Oromoon yeroo itti tokkummaan ol jedhee qabsoo isaa finiinsu tahuu akka qabuu ajaja olaanaan ABO/WBO gad jabeessee hubachiisa.
Caamsa 07 2020
Fakkeessuun Amma Yoomiitti Biyya Bulcha?